Sekretera jeneralin’ny OIF : “Tsy tokony hisy handa ny fandraisana ny Frankôfônia” | NewsMada
Sekretera jeneralin’ny OIF : “Tsy tokony hisy handa ny fandraisana ny Frankôfônia”
“Tsy tokony hisy firenena handa ny fahatongavan’izao tontolo izao eto Madagasikara amin’io fihaonana an-tampon’ny Frankôfônia io. Ny hafa aza mangataka ny hanaovana izany any aminy, ka raiso an-tanan-droa io fihaonambe io.”
Anisan’ny nambaran’ny sekretera jeneralin’ny Fikambanana frankôfônia (OIF), Michaëlle Jean, tamin’ny mpanao gazety teny Antaninarenina, omaly, io, talohan’ny namaranany ny fitsidihana natao teto Madagasikara nandritra roa andro.
Tokony horaisin’i Madagasikara ny fihaonana an-tampon’ny Frankôfônia, fa ho avy eto amintsika izao tontolo izao. Raha ny hitany hatreto, manana ny fahazoana mandray izany ny Malagasy. Na eo amin’ny fahavononana io, na ny fikarakarana…
Tsy misy resaka ny momba ireo Nosy malagasy
Misy firenena 80 ireo mpikambana eo anivon’ny OIF, fa tsy hoe lohalaharana amin’izany i Frantsa. Mpikambana ao amin’ny OIF toy ny firenena hafa rehetra izy. Fifandraisan’ny samy firenena ny amin’ireo Nosy malagasy manodidina, raha ny fanazavany.
Tsy tafiditra ho anisan’ny lahadinika amin’ny fihaonana an-tampony ny ny amin’ireo Nosy malagasy. Anjaran’i Madagasikara sy Frantsa ny mandamina izany, ary raha ny zavatra reny: efa misy fifampiraharahana mandeha any…
Maro ny firenena vonona hanampy
Tsy tokony hatahoran’i Madagasikara ny hiavian’ny asa fampihorohoroana amin’ny fandraisana ny fihaonana an-tampon’ny Frankôfônia, fa manampy antsika izao tontolo izao, raha tsiahivina izay nambarany, afakomaly.
Miomana amin’izay fahaiza-manao sy ny fepetra raisina ary izay rehetra azo atao amin’ny fakam-baovao sy fanaovana fanadihadiana ary fahazoana mihetsika amin’ny fiantohana ny fitandroana filaminam-bahoaka isika mandritra ny fihaonana an-tampony.
“Tsy olan’ny firenena iray ny asa fampihorohoroana, fa olana eran-tany amin’izao fotoana izao”, hoy izy. Tsy miato amin’ny hetsika sy ny asa ary miaina isika, satria misy mitady hampihozongozona antsika amin’ny fampihorohoroana any… Tokony hijoro sy tsy hihozongozona amin’izany isika.